Brezila : Fiaramanidina iray nitondra indiana fito, nanjavona any anaty ala Amazon, fa tsy misy miresaka izany na iray aza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Janoary 2019 7:11 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Aymara, English, русский, Italiano, Ελληνικά, Deutsch, 한국어, Português
Ny 2 Desambra ny fiaramanidina kely iray no niainga avy ao Matawaré, tanàna kely ao afovoan'ny ala Amazoniàna ao amin'ny fanjakan'i Amapà, avaratr'i Brezila. Toa anatiny dia nahitàna ilay ramatoa indiàna avy amin'ny foko Akuriyó, ny vinantolahiny, ary fianakaviana iray avy amin'ny foko Tiriyó [fr] – profesora iray sy ny vadiny ary ireo zanany telo. Jeziel Barbosa de Moura, 61 taona, efa manana trakefa no sady mahafantatra tsara ny faritra no mpanamory.
Efa mahazatra an'ireo indiàna ao amin'io faritra io ny mandray fiaramanidina avy any amin'ireo vohitra tena mihataka lavitra mba hankanesana ao Laranjal do Jari, ary avy eo indray dia fiara no mitondra azy ireo mandritra ny ora efatra ho any Macapà renivohitra. Hatramin'ny 3000 R$ ( 770 dolara eo ho eo) ny sidina mandritra ny ora iray. Dimy ambiroapolo minitra taorian'ny niaingàny, nilaza tamin'ny fampitampeo i Jeziel fa mila mipetraka maika. Io no fifandraisana farany tamin'ilay fiaramanidina. Araka ny vaovao navoakan'ny tranonkala G1, nanao sidina tsy ara-dalàna izy, no sady tsy nanome ny zotra handehanany.
Tapabolana aty aoriana, ary ora 128 nanaovana fikarohana, nambaran'ny tafika an-habakabaka breziliàna fa hatsahatra ny fikarohana ireo mety ho sisa velona. Fiaramanidina roa sy angidimby iray no nitety faritra mirefy 12.000 km toradroa, mitovy aminà kianja filaovana baolina kitra miisa 12.000. Kanefa, tsy nanamora velively ny fikarohana ny fikitrok'ilay ala virijiny.
Araka ny ambaran'ny Agência Brasil, ireo naman'ilay mpanamory sy ireo indiana avy amin'ny foko efatra – Apalai, Akuriyó, Tiriyó ary Waiana – dia manohy amin'ny anaran'ny tenan'izy ireo ny fikarohana ety an-tanety. Ny Fifandraisan'ireo vahoaka sy ireo fikambanana indizeny ao amin'ny fanjakan'i Amapà ary ny avaratr'i Parà dia namoaka taratasy iray nanamelohany ny fanapahankevitry ny tafika an'habakabaka hanatsahatra ny fikarohana.
Ao anatin'io no ampahatsiahivan'ilay vondrona fa efa hatry ny ela be no nisy ny fitakiana hampanarahana fenitra ny toerana fitodiam-piaramanidina any anatin'ireo vondrom-piarahamonina indizeny. Ary tsy manamora mihitsy ny asa fanavotana ny tsy fisian'izy ireny. Mbola araka ny G1 ihany, ambaran'ny ministeram-panjakana federaly fa misy toeram-pitodiana 249 tsy ara-dalàna any anatin'ireo tany indiàna manerana an'i Brezila. Ao Amapà fotsiny, “misy 17 tsy ara-dalàna ampiasaina hitaterana ireo mpiasan'ny fahasalamàna, mpiasan'ny fanabeazana ary ry zareo indiana rahateo”.
Flávia Moura, zanakavavin'ilay mpanamory, mitantara hoe:
Hain'ny raiko tsara iny faritra iny, efa ela izy no nanamory, araka izany fantatra fa nahita fomba hipetrahana any an'anona any izy, afa-tsy ny hoe sarotra hita ao anatin'ilay ala ilay toerana. Haintsika ny fahasarotan'ny fanavotana atao an'habakabaka, saingy tianay ho hita ry zareo, izany no antony niantsoanay ireo garimpeiros [fr] vitsivitsy sy ireo indiàna naman'i raiko, izay ao an'ala. Tsara ofana ny tafika ary vonona ny hanampy azy izahay.
Ny andro nampitsaharana ny fikarohana, ny filoha voafidy Jair Bolsonaro, izay mandray ny asa maha-filohan'i Brezila azy manomboka ny volana Janoary, dia nanambara ny faniriany hamerina ny famaritana ny tahiry indiàna ao Raposa Terra do Sol [fr], mba hahafahana mitrandraka izany “araka ny tokony ho izy”.
17 000 km², iainan'ireo vazimba teratany eo amin'ny 17 000 avy aminà foko dimy samihafa – Macuxi [fr], Wapixana, Ingarikó, Taurepang sy Patamona. Mampahatsiahy ihany koa ilay mpisolovava, Lucio Augusto Villela da Costa, fa ilay faritra dia “malaza amin'ny fananany harena mineraly toy ny firaka, diamondra, volamena, niobium, ny viraty, ny kaolin, ny méthyste, ny varahina, ny diatomite, ny barytine, ny molybdène, ny titane ary ny vatosokay, ary tsy adino amin'izany ny maha-tahiry lehibe indrindra faharoa erantany azy amin'ny fanànana oranioma”.
Raha ny filazan'ireo manampahaizana manokana, ny hevitra hitrandraka io tany io dia “tsy mifanaraka amin'ny lalampanorenana” raha ny lalàna ao Brezila no jerena. Fandaharanasa mifanohitra amin'izay voalaza ao amin'ny Lalampanorenana izay miantoka ny zon'ireo vazimba teratany ho afaka hitahiry ny taniny, ny fomba fiainany ary ny fombandrazany”.
Andro visy talohan'izao, ny tranonkala De Olho nos Ruralistas (Arahontsika maso ireo Ruralistes), izay nanaitra mikasika ireo fifandirana momba ny tany sy ny politika ao Brezila , dia nitafa tamin'ilay mpahay momba ny olombelona, Denise Fajardo, mpanadihady avy amin'ny lvontoerana Iepé momba ilay fiaramanidina tsy hita nanjavonana. Aminy, tsy zavatra vaovao ny politika ankehitriny ao Brezila sy ny fomba izay hikarakarana ilay raharaha eo amin'ny sehatry ny fampahalalana ny vaovao :
Ny Valam-pirenena an-tendrombohitra ao Tumucumaque [fr] dia faritra kely iray izay izy ireo no tompony ary nametrahan'ny Fanjakana an-dry zareo, na raha ny marina, toerana nataon'ny Fanjakana hanokana-monina azy ireo. Tena sarotra ny fidirana ao amin'ilay faritra ary tsy nomena fitaovana ho fivezivezena na iray aza io vahoaka io, izay mijanona ho mihiboka ao amin'ilay vohitra.
Ny tanànan'i Matawaré, izay niaingan'ilay fiaramanidina nanjavona, dia tsy afaka idirana afa-tsy amin'ny alàlan'ny làkana sy fiaramanidina irery ihany. Ny alin'ny 17 Desambra, nisy fiaramanidina iray hafa nitondra indiàna ihany koa tradoza tao Amazonia, tany akaikin'ny faritry ny sisintany peroviàna. Avotry ny tafika an-habakabaka ireo olona telo tamin'izany.